Adobe Lightroom dia misy amin'ny Apple M1 sy Windows 10 Arm | Famoronana an-tserasera
Mivoatra ny zava-drehetra ary toy izany koa no mitranga amin'ireo mpikirakira fitaovana finday sy ireo izay tsy ary manana ny puce Apple M1 na ARM tamin'ny teo aloha (Toy ireo Qualcomm Snapdragon) miaraka amin'ny Windows 10. Ary izany no antony namerenan'ny Adobe an'i Lightroom ho fampiharana teratany ho an'ireo karazan-chips roa voalaza, na avy amin'ny Apple na Microsoft.
Una tolo-kevitra mahaliana izay mifandray amin'ny fanatsarana ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny angovo amin'ny chips Apple M1 sy Qualcomm Snapdragon (Windows 10); ary hitantsika ity farany amin'ny fitaovana finday maro karazana miaraka amin'ny Android ho toy ny Operating System.
Izany hoe, ny kinova farany an'ny Adobe Lightroom Fampiharana zanatany ho an'ny sehatra Apple M1 sy Windows ARM izao. Ny zava-drehetra dia ho fanatsarana ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny angovo amin'ireto sehatra ireto ary amin'ny fotoana maharitra dia hankafizinay ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fahafahantsika manitatra ny androm-piainan'ny bateria finday na ny fahombiazany amin'ny lahasa misy akora betsaka kokoa.
Adobe manamafy fa hanohy hanatsara ny fahombiazan'ity karazana sehatra ity amin'ny fanavaozana ny ho avy, ary tsy ho ela akory dia hanao izany amin'ny solosaina miorina amin'ny Intel; Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tiany ho faly isika rehetra ka ny fahombiazan'ny fitaovana misy antsika no tsara indrindra.
Voalaza fa, a Ary ny kinova Apple M1 sy Windows Arm of Photoshop ao amin'ny fantsona beta tamin'ny novambra, izay manondro fa tsy ho ela dia hanana kinova farany hankafizantsika ireo kojakoja voalaza ireo. Ianareo izay manana Creative Cloud dia afaka mandalo ny beta-n'io mba hihazonana izany.
Tsy ho ela dia hahafantatra bebe kokoa momba izany isika Inona no antenaina amin'ny Adobe amin'ny taona 2020 be atao ary inona no nisy antsika afaka mijoro ho vavolombelona amin'ny feony fanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe Lightroom dia lasa fampiharana teratany ho an'ny Apple M1 sy Windows 10 amin'ny ARM